mercredi, 29 juin 2016 15:50
Farafangana : Mirongatra ny halatra lakolosy
Ireny tranainy be ireny no be mpangalatra, ary Fiangonana maro no efa lasibatra. Hatreto aloha dia mbola tsy mazava amin'olona ny antony ilana io lakolosy io, fa ny ren’izy ireo dia hoe : asiana finday ao anatiny ka raha maty na tsy mahazo “réseau” ilay finday dia ireny no tena kendren’ny mpangalatra. Entin’ny tahotra ireo kristianina amin'ny Fiangonana sasantsany dia misafidy mivarotra ny lakolosiny sao misy mangalatra.
mercredi, 29 juin 2016 15:17
Sary présidence sy Sobika
HJRA: Voaopa sy voahorakoraka ny filoha
Ny alin'ny 26 jona taorian'ny fipoahana tetsy Mahamasina, dia nirodorodo nankeny amin'ny hopitaly HJRA ny filoha Hery Rajaonarimampianina mivady sy ireo mpiara-miasa akaiky aminy, teo ihany koa ny Praiminisitra.
mercredi, 29 juin 2016 15:14
Soamahamanina: Miala any ny HERY-mpamoretana
Tsy niandry ela akory ny avy ao amin'ny OMC hivondronan'ireo mpitandro ny filaminana fa mandrahona ny tsy fahazoana manao fihetsiketsehana ao antananan'ny Soamahamanina. Tsiahivina moa fa ny zandary izao no lasa gardien miandry ireo Sinoa, satria dia amanjatony izy ireo no mikatona tsy mifandray amin'ny Malagasy ao amin'ny toerana izay hitrandrahan'izy ireo volamena. Ny vahoaka amin'arivony moa dia tsy manaiky ary manome 72 ora ireto Sinoa hialany amin'ny tanin'izy ireo. Asa izay hitranga?
mardi, 28 juin 2016 18:57
Consulat de Monaco: Opération couverture
Nosantarina androany ny Opération couverture izay fanaon’ny Consulat de Monaco isan-taona, ka ny teny amin’ny fokontany Andranomanalina Isotry no nisantatra izany. Operation couverture, ho an’ny fokontany izay, natao manokana ho an’ireo olona sahirana, efa nanomboka tamin’ny 2009 ny Consulat de Monaco no nanomboka nanao izao asa izao. Fokontany miisa 36 amin’izao no zaraina bodofotsy ka manodidina ny 5600 isa eo anivon’ireo fokontany ireo, ka zaza latsaky ny 5 taona no ho zaraina izany. Marihina moa fa dia misy ny fiaraha-miasa tamin’ny orin’asa Star izay efa tamin’ny herintaona no niara niasa. Bodofotsy miisa zato isaky ny fokontany moa no natolotr’izy ireto.
mardi, 28 juin 2016 15:50
Loza teny Mahamasina : Nosavaina ny tranon’i Berija
Nosavain’ny mpanao fanadiahadiana ny trano fonenan’i Ravelomanantsoa Berija eny Ankatso io atoandro io. Fiahiahiana taorian’iny raharaha fipoahana nahafatesana olona telo sy naharatrana 91 hafa teny Mahamasina ny harivan’ny 26 jona iny no voalaza fa antony. Niaiky i Berija, iray amin’ireo mpitarika ny “Fitoniana Tour” izay fitetezam-paritra nampanaovin'ny fitondrana Rajaonarimampianina azy sy ireo namany mpitarika grevy teny Ankatso, fa nijery matso teny Mahamasina niaraka tamin’ireo tanora mpianatra nakarin’izy ireo avy any amin’ny faritra. Nilaza anefa izy fa nanohy fety niaraka tamin’ireo “chefs d’équipe” niisa 39 tao amina toeram-pisakafoanana iray teny Ambohipo io alahady io nanomboka tamin’ny 4ora tolakandro ka hatramin’ny 3ora maraina.
mardi, 28 juin 2016 14:25
Tahiritsary Sobika Sambava
Tanambao Daoud : Lasan’ny jiolahy ny lavanila sy vola 680 tapitrisa iraimbilanja
Sesilany ny fanafihan-dahalo mangalatra lavanila any SAVA. Notafihina dahalo efa-dahy ny tokatrano iray tao amin'ny Fokontany Antsahamazava, Kaominina Tanambao Daoud, any Sambava ny zoma tokony ho tamin’ny 9 ora alina. Voafira zava-maranitra ilay rangahy tompon-trano, niharan’ny herisetra koa ny vadiny izay bevohoka. Lasan’ireo jiolahy ny lavanila roa gony lehibe vao avy nandrahoina sy vola 680 tapitrisa iraimbilanja.
mardi, 28 juin 2016 11:38
Filan-kevitry ny governemanta : Baomba artisanaly ilay nipoaka ?
Nanao fanambarana ny governemanta malagasy tao aorinan’ny filan-kevitriny ny governemanta omaly fa baomba artisanaly izay nahitana poti-by be dia be iny napoaka teny Mahamasina ny alahady teo iny. Miala tsikelikely izany ilay filazana fa grenade offensive iny nipoaka iny. Tsiahivina fa ny lehibehan'ny zandarimeriam-pirenena dia efa nanambara fa mety ho "explosive électronique" iny napoaka iny. Efa misokatra ankehitriny ny fanadiadihana ka andrasana izay tena vaovao marina mikasika an’iny fipohana iny.
lundi, 27 juin 2016 22:09
Vakinankaratra : Nahazo trano fiasana manokana ny mpisolovava
Hanana ny trano fiasany manokana manomboka izao ny fikambanan’ny mpisolovava ao Vakinankaratra. Natao ny sabotsy 25 jona teo ny fametrahana ny vatofotry ny asa fanorenana, izay ao anatin’ny faritra misy ny Lapan’ny Fitsarana ao Antsirabe ihany ary notarihin’ny filohan’ny fitsarana Antsirabe Rasoloharimanana Aimé sy ny filohan’ny Holafitry ny mpisolovava Raharison Hubert. Aharitra 3 volana ny asa fanorenana. Efa ny taona 2013 moa no nahazoana ny fankatoavana ny hanorenana ity trano ity, saingy ny hoenti-manana no nahataraiky ny fanorenana.
lundi, 27 juin 2016 20:56
Iray volan’ny ankizy : Lanonam-be tao Antsoantany
Nanamarika manokana ny famaranana ny fankalazana ny “Iray volan’ny ankizy” ny Kaominina Antsoantany – Antsirabe II, ny andron’ny 24 jona teo. Nisy ny fifaninanana dihy sy kabary malagasy, izay niainga tamin’ny lohahevitra “fihavanana sy fampandrosoana”, ary nampiarahana tamin’ny fanamiana nampiavaka ny tsirairay. Nialoha izay dia nisy ny nofonkena nitam-pihavanana nanomezam-boninahitra ireo ray aman-dreny avy amin’ireo Fokontany niisa 5 mandrafitra ny Kaominina.
lundi, 27 juin 2016 20:54
Ambodirano : Kaominina tsy manana trano any Vondrozo
Natao androany alatsinainy 27 jona ny lanonana nametrahana ofisialy amin’ny toerany ny Ben'ny tanàn'ny Kaominina ambanivohitr'i Ambodirano, Distrikan'i Vondrozo, Manjarimanana Selimony Roger sy ny lefiny. Tsara ny manamarika fa Kaominina vaovao izy ity raha mbola nitambatra tamin'i Matsinjo teo aloha. Mbola tsy manana trano ny Kaominina. Omby roa no novonoina ho nofon-kena mitaham-pihavanana tamin’izany.
Page 454 sur 516